Archive du 20180514
Pastera Mailhol Hosamborina ato ho ato ?
Mandeha ny feo fa hosamborina ny pastera Mailhol, mpitarika ny fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara.
Mihantsy ady ny filoha Tsy hitsitsy ny depioten’ny fanovana
Raikitra indray ny fihantsian’adin’ny HVM. Vao mainka mampiaka-pofona sy mahatezitra ny depioten’ny fanovana ny amboletran’ny filoha nampanan-kery ireo lalàna fehizoro misahana ny fifidianana ny alin’ny zoma teo.
Voahangy Rajaonarimampianina Mety ho ratsy fiafara
Anisan'ny nampirodana an'i Robert Mugabe, filohan’i Zimbabwe teo aloha teo amin'ny fitondrana ny fitsabahan'i Grace Mugabe tamin'ny raharaha politika.
Depiote Tinoka Roberto Nampitandrina ny Praiminisitra
“Ho an’ny praiminisitra … izao ny hafatray aminao hoe fantatray fa novidianao daholo ny tanàna eny Ambohibao Ivato, izay nanaovana Villa miisa 5 amin’izao, ka ianareo Bianco miantso anareo aho hijery hoe ohatrinona loatra ny karaman’ny praiminisitra ka hahavidianany villa 5”, hoy ny depiote Tinoka Roberto, teny amin’ny 13 mey ny sabotsy teo.
Olana fototry ny krizy Tsy misy sahy mampiharihary
Hatramin’ny taona 1972 no ho nankaty dia tsy mbola nety nivaha ihany ny krizy eto Madagasikara ary vao mainka aza miha mafy hatrany.
Ady amin’ny kolikoly ataon’ny VTTFM ONG maromaro manerana ny nosy no manohana ny hetsika
Nivoaka tamin’ny fahanginana ihany koa ny faran’ny herinandro teo ny Vondron’ny Tia Tanindrazana ho an’ny Fanorenana an’i Madagasikara ( VTTFM).
Kolikoly tsy hita pesimpesenina Ho avy amin-dRajao ny mafaitra
Voizina sy hamavoina ho fanonganam-panjakana hatrany ny tolon’ny depioten’ny fanovana, izay tsy mivaona amin’ny lalàmpanorenana hatreto.
Depiote, mpanao gazety hiakatra fampanoavana Atao fitaovana politika indray ny fitsarana ?
Mivoaka indray ny resaka amin’izao fotoana fa miala any ny lisitra mainty ahitana anarana depiote, mpanao gazety ary olon-tsotra, ampangaina fa mpamatsy vola ny hetsika eny amin’ny kianjan’ny 13 mey,
Vondrona Eoropeanina Manampy an’i Madagasikara amina sehatra maro
Mafonja ny fiaraha-miasan’ny Vondrona Eoropeanina sy i Madagasikara, ary misandrahaka amina lafin-javatra maro mifototra amin’ny fampandrosoana, hoy ny fanehoan-kevitr’i Antonio Benedito Sanchez nandritra ny famaranana ny herinandron’i Eoropa teny amin’ny Tour Zital Ankorondrano ny sabotsy 12 mey teo.
Fikambanamben’ny zanak’Atsimo Atsinanana Tsy manaiky ny handrobana ny fananany
Nivoaka tamin’ny fahanginany taorian’ny fandinihan’izy ireo ny toe-draharaha ara-politika misy eto amin’ny firenena, noho ny fifanolanana misy eo amin’ny Hvm an-daniny sy ireo depiote mpanohitra mivondrona ao amin’ny depioten’ny fanovana an-kilany, ny fikambanamben’ny zanak’Atsimo Atsinanana na “AGSE” ny zoma antoandro tao amin’ny foiben’ny fikambanan’izy ireo.
“Zone Rouge” arantiranty Manomboka mikoropaka ny fitondrana HVM
Tsikaritra tamin`iny herinandro lasa teo iny fa manomboka mipetraka ny kofehy mena hamantarana fa “zone rouge” ny faritra iray, indrindra manoloana ireny lapa-panjakana sy toby miaramila ireny.
Ahmad - filohan’ny CAF Olona faha 15 to teny indrindra aty Afrika
Mahatsapa ny mpanara-baovao aty Afrika, indrindra fa ireo mpankafy ny fanatanjahantena sy ny taranja baolina kitra, araka ny vaovao navoakan’ny gazety boky Jeune Afrique fa manomboka hita mivaingana ny fanatsarana nentin’ny filohan’ny CAF Ahmad momba ity taranja iray be mpankafy indrindra eto ambonin’ny tany ity.
Fanelanelanan’ny FFKM Mbola henjana ny lalao
Tsy mbola voafaritra mazava ny vahaolana mahomby sy azo antoka amin’izao toe-draharaha misy eto amintsika izao. Mihamafy hatrany ny hetsika fitakiana ataon`ny depiote ho an`ny fanovana izay efa miparitaka manerana an’i Madagasikara, eny hatrany ivelany ihany koa aza.
Fiangonana FJKM Niala voly tao anatin’ny fitoriana ny filazantsara
Mitohy hatrany ny asa tanterahin’ny fiangonana Fjkm ho fanavotana ny fanahin’ny mpiara-belona rehetra ao anatin’ilay teny filamatra manao hoe : vontosy filazantsara i Madagasikara.
Open pétanque Boss-Elite Lasan’i Yves sy Lesakely ny 2.000.000 ariary
Lasan’i Yves sy Lesakely ireo amboara lehibe 2 sy ny vola 2.000.000 ariary tamin’ny fifaninanana tsipy kanetibe “Open pétanque Boss-Elite” nokarakarain’ny CBT, nahazo tohana mavitrika tamin’ny Orinasa Sbs, tetsy amin’ny Boulodrôme Cbt etsy Mahamasina ny sabotsy 12 sy omaly alahady 13 mey 2018.
Hetsika 35 taonan’ny 3Fai rugby Ny Uscar boaty sy Tfma Flesy kartie no tafita voalohany
Natomboka omaly alahady 13 mey tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny hetsika fanamarihan’ny fileovana 3Fai rugby ny faha-35 taona niorenany. Fantatra fa ny ekipan’ny Uscar eo amin’ny boaty sy ny Tfma Flesy Ankasina eo amin’ny kartie no tafita voalohany avy amin’ny lalao famaranana rehefa samy nandresy avy ny Uasc (37-35) sy ny XV Family (21-11) teo amin’ny lalao 1/2-dalana.
Orange kitra Inter-Instituts Nafanafana teny Andohalo
Notontosaina omaly alahady 13 mey 2018 teny amin’ny kianja sentetikan’Andohalo ny andro faha-2 amin’ny lalao baolina kitra lalaovin’olona 6 ka hifaninanan’ireo sekoly ambony isan-tsokajiny eto Antananarivo ary karakarain’ny ligin’Analamanga sy ny orinasa Orange Madagascar miaraka.
Efa avy fadiranovana ?
Miandry, miandry lava izao hatrany no ampanaovin’ireo manampahefana ny Malagasy mitaky ny hivoahana haingana amin’ny fahantrana lalina mahazo azy ankehitriny.
Tanora mpikaroka momba ny harem-pirenena « Efa mipoaka ny tolon’ny fokonolona ! »
Manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena dia namoaka fanambarana koa ry zareo avy eo anivon’ny fikambanan’ireo tanora mpiaro sy mpampanjary ny harem-pirenena na ny Tandroharena Madagasikara fa sarotra ny tsy hiteny amin’izao toe-draharaha mitranga izao.
Toekarena mifototra amin’ny ranomasina Handresy haingana ny fahantran’ny Malagasy
Mbola mangingina ny resaka toekarena mifototra amin’ny ranomasina (économie bleue) eto Madagasikara. Maro anefa ny firenena efa lasa lavitra tamin’ny fampandrosoana io sehatra io. Anisan’ireny ny nosy Maorisy sy Seychelles izay tena nanao ho zava-dehibe ny fampandrosoana miainga amin’ny fitrandrahana mitodika amin’ny ranomasina.
Tarika ‘Zay Nahafinaritra ny seho na dia tara fanombohana aza
Feno 22 taona izao no nisian’ny tarika ‘Zay ary mbola no porofoiny hatrany ny mampiavaka azy hatramin’izay tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina, omaly.
Tombola tamin’ ny FIM Olona telo no nitsikian’ny vintana
Betsaka ireo olona voasarika hitsapa vintana amin’ireny karazana tombola ireny ankehitriny.
Tranon’i Maurice Tsihavonana Nisy nanafika, olona iray no maty
Hita faty tao an-tranon’i Maurice Tsihavonana mpanao famakafakana politika ao amin’ny On Air Radio 100.8 Fm teny Ambatobe ny mpiambina azy iray.
Taksibrosy iray no nidaboka tamin’ny sisin’arabe teo amin’ny 10km hiditra an’i Manerinerina RN4 omaly tokony ho tamin’ny 3 ora. Raha nisy kely dia nivarina tany an-kady. Tsy nisy maty fa naratra kosa ny olona miisa telo.
TSY MANDRAY ANDRAIKITRA
Ireo olona misafidy ny hangina sy tsy maneho hevitra mihitsy (majorité silencieuse) no tena tompon'antoka amin'ny tsy fahombiazan'ny firenena.
Fihitaran’ny grevy Hisy akony amin’ny vidim-piainana
Hatreto aloha dia kely hatrany ny fanantenana amin’ny famahana ny krizy eto Madagasikara.
Analamahitsy Nihetsika ireo mpivarotra amoron-dalana
Noraran’ny kaomisarian’ny polisy ao amin’ny boriborintany faha-8 eny Analamahitsy tsy hivarotra ny sabotsy 12 mey teo ireo mpivarotra amoron-dalana miainga eo amin’ny fivarotan-tsolika Total ka hatreny amin’ny sampanana hidina any amin’ny Cité sy ny Jirama Analamahitsy iny.